एक पीडित युवतीकाे मार्मिक पत्र: ‘मेरो जीवन निमोठ्नेहरू निर्दोष हुन् ?’ « Nepal – the country of the Buddha and the Mt. Everest
« Martin Place siege ended: Sydney siege gunman identified (Videos)
HowaNepali village girl became an ultramarathon champion via rebel army »
मेरो आमाबुबाले ‘अब विद्यालय जानु पर्दैन, बरु विवाह गरिदिन्छौं’ भन्नुभयो । मेरो गाउँमा महिनावारी नभएकी छोरीलाई बेहुली बनाएर अन्मायो भने ठूलो धर्म लाग्छ भन्ने विश्वास छ । आमाबुबाको कुरा थाहा पाएर मेरा स्कुलका गुरुहरू घरमै आई सम्झाईबुझाई गरिदिनुभयो र मैले अर्को विद्यालय गएर पढ्ने अवसर पाएँ ।
दुई दिनको परीक्षापछि गणित विषयको तयारीका लागि एक दिन छुट्टी थियो । बिदा भएका कारण म बसेको घरका आफन्तको अनुमति लिएर पाटनबजारस्थित पुस्तक पसलमा गणितको गेसपेपर किनेर ल्याउँछु भनी गएँ । त्यो बजारमा एउटैमात्र पुस्तक पसल थियो । एसएलसी चलिरहेका कारण विद्यार्थीहरूको भीड थियो । म आफ्नो पालो कुरिरहेकी थिएँ । पुस्तक पसले ‘हिजोको जाँच कस्तो भयो, राम्रो गर्‍यौ ?’ भन्दै मसँग बोल्दै थियो । त्यहाँ बस्दाबस्दै गर्मी भयो । चैतको महिना त्यसै पनि गर्मी बढेको थियो । मैले ‘पानी दिनुस् न दाइ, कस्तो प्यास लाग्यो’ भनें । ऊ ‘एकैछिन है’ भनी पुस्तक पसलको सटरबाट भित्र अर्को कोठातिर गयो । अनि रित्तै आई ‘पानी सकिएको रहेछ, मैले लिन पठाएको छु’ भन्यो । मैले ‘ठिकै
दिनुस्, गइहाल्छु’ भनें ।
लागेजस्तो, त्यो पसल पूरै उल्टो फर्केजस्तो, वाकवाक लागेजस्तो भयो । मैले त्यही पुस्तक पसलेलाई ‘दाइ मलाई वाकवाक लागेजस्तो भयो, ट्वाइलेट कता छ’ भनी सोधें । ऊ ‘ट्वाइलेट अलि पर छ, म देखाइदिन्छु’ भनी अघिअघि लाग्यो ।
म ट्वाइलेटभित्र पस्नेबित्तिकै ऊ पनि सँगसँगै पस्यो । मैले किन आएको भन्दा ‘हल्ला नगर्, म जे-जे भन्छु, त्यही मान्’ भन्दै भित्तातिर धकेल्यो । एकैछिनमा अघि सोडा ल्याएर दिने केटो पनि आइपुग्यो । उसले ‘कोही आए भने मलाई बोला है’
म भने आफूलाई बचाउन ठूलो कसरत गर्दै थिएँ । २-३ मिनेटको घम्साघम्सीपछि, त्यो ट्वाइलेटमा ब्लेड रहेछ, त्यसले मेरो खुट्टाको औंला र पैतालामा काटिदिए । ‘अब यो ब्लेडले तेरो घाँटी चिर्छौं’ भन्दै थिए । म रुन, कराउन, बोल्न नसक्ने भइसकेकी थिएँ । उनीहरूले काटेको ठाउँबाट रगत बगिरहेको थियो । यत्तिकैमा उनीहरूले आफ्नो लुगा खोलेर मेरो मुखमा कोचिदिए र पालैपालो अस्मिता लुटे । मेरो सामूहिक बलात्कार गरे । मेरो अस्मिता लुट्नेहरू एउटा बैतडी जिल्ला, भूमेश्वर-३ को सागर भट्ट -वर्ष २३) थियो भने अर्को बैतडी, गुजर-२ को अमर अवस्थी -वर्ष ३०) थियो । सागर भन्ने जगन्नाथ पुस्तक पसलको सञ्चालक थियो भने अमर चाँदनी फोटो स्टुडियोको सञ्चालक थियो । उनीहरूले मलाई कति घन्टासम्म लुछे, त्यो याद छैन । होस आउँदा म ललितपुर जिल्लाको पाटन मानसिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा लडिरहेकी थिएँ ।
घटना भएको छ महिनापछि मात्रै मेरो मानसिक अवस्थामा सुधार आई पहिलेका कुराहरू सम्झन सक्ने भएँ । उता अपराधीहरूले ‘पागलले त जे पनि भन्छ, जसलाई पनि आरोप लगाउँछ, हामी निर्दोष छौं’ भन्दै छन् रे भन्ने सुनें । तसर्थ २०६९ पुस ९ गतेका दिन मलाई सहयोग गर्ने रक्षा नेपाल भन्ने संस्थाका कर्मचारी र अभिभावकको सहयोगमा म जिल्ला अदालत, बैतडीमा जिल्ला न्यायाधीश हिमालयराज पाठकका अगाडि बयानका लागि उभिएँ । त्यतिबेला मेरो सामुन्ने उभिएका ती अपराधीको हर्कत म यहाँ बयानै गर्न सक्दिनँ । मेरो बयान, केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले गरेको कपडा परीक्षण, अस्पतालले सामूहिक बलात्कार भएको भनी दिएको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टलगायत अन्य अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा जिल्ला न्यायाधीशको इजलासले ती अपराधीहरूलाई १३ वर्ष कैद र जनही ५०-५० हजार रुपैयाँको जरिवाना तोक्यो ।
ती अपराधीले निमोठिदिएको मेरो जीवनमा थोरै आशा पलाउन थाल्यो । यो सफलतासँगै पुनः आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने सपना देख्न थालें । अलिकति खुसी हुन नपाउँदै २०७१ असार ३ गते कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पृष्ठमा ‘बैतडीमा छात्रा बलात्कार प्रकरण, सामूहिक बलात्कारमा दोषी ठहरिएकालाई उन्मुक्ति’ भन्ने समाचार छापिएको देखें । त्यही समाचारबाट थाहा भयो- एक वर्षअघि बैतडी जिल्ला अदालतले १३ वर्ष कैद भनी गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरका न्यायाधीशद्वय नरबहादुर शाही र रमेशप्रसाद राजभण्डारीको
This entry was posted on December 17, 2014 at 1:53 pm	and is filed under Miscellaneous. Tagged: Puja Bohara. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.